Nin ”cunsuri” ah oo weeraray haweeney Soomaali ah oo uur ah | Kobciye24.com
Nin ”cunsuri” ah oo weeraray haweeney Soomaali ah oo uur ah
May 23, 2017 - jawaab
David Gallacher oo 37 jir ah ayaa bishii Agost ee sannadkii hore weeraray gabar Soomaaliyeed oo la yiraahdo Samsam Xaji Cali oo ku sugnaa degmada Bletchley oo ku taala Buckinghamshire ee dalka Britain.
Xaakimka xukumay David waxaa uu ku tilmaamey in uu ninkani uu yahay “Cunsuri Xun“.
Maxkamada Aylesbury ayaa dhageysatey dacwada ka dhanka ah ninkani, waxaana la sheegay in uu aflagaadeeyay gabadaha oo uu ku yiri “dharkaaga khariban ayaad halkan la timid”
Seyga marwo Samsam oo lagu magacaaabo Cabdullahi Suleemaan oo isku dayay in uu dejiyo xaalada ayaa waxaa madaxa dhalo khamri ah iyo baraf uu gacanta ku sitay kaga dhuftay David Gallacher, waxaana uu sidoo kale beerka ka laaday Samsam oo uur laheyd.
Xaakimka lagu magacaabo Francis Sheridan oo dhageystay kiiskan aya waxaa uu sheegay in Samsam ay u sheegtey David Gallacher in ay uur tahay, balse waa uu iska indha tiray, laadkii ayuu na kusii waday, waxaana uu ka tagay iyada oo dhulka garguuraneysa, kaddib waxay dareentey dhiig ka yimid kahor inta aaney dareemin in ilmihii uu ka soo dhacay oo ay dilantay.
“Eedeysanahani waa cunsuri, luuqada uu isticmaalayeyna waxay ahayd cunsurinimo,” waxaa sidaasi yiri xaakimka.
Waxaana uu u sheegay in dembiga geystay in la gaaray “xilligii aad baran laheyd cunsurinimada iyo dhaqanka xun inay yihiin waxyaabo laga soo gudbey”.